महेन्द्र उमाविका बिद्यार्थीको स्वास्थ्य परिक्षण सम्पन्न – Gulmiews
महेन्द्र उमाविका बिद्यार्थीको स्वास्थ्य परिक्षण सम्पन्न
३ भाद्र २०७३, शुक्रबार १९:०१ Raju Gautam
गुल्मी, भदौ ३ । महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय तम्घास गुल्मीमा बिद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । विद्यालयको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीको सहयोगमा कक्षा ६ देखि ८ कक्षा सम्मका विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो । स्वास्थ्य परिक्षणमा २ सय ३० जना बिद्यार्थीहरुले चेकजाँच गराएका थिए ।
नेपाल जुनियर रेडक्रस सर्कल महेन्द्र उच्च मा.वि. का अध्यक्ष विशाल पन्थीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा प्रचार्य केशर बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । विद्यालयका सहायक प्राचार्य मोतिप्रसाद खनालको बिशेष आतिथ्यता रहेको कार्यक्रमको संचालन जुनियर रेडक्रस सर्कलका शिक्षक नायक घनश्याम पाण्डेले गर्नुभएको थियो । सहायक प्रचार्य खनालले आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गराएर कार्यक्रको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका हेल्थ असिस्टेन्ट उदय सुनार, तारा बहादुर कार्कीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो भने एन.एम. अध्ययनरत विद्यार्थीहरु गीता श्रीस, रक्षा भण्डारी र संगीता श्रीसको टोलीले सहयोग गरेको थियो ।
@gulminewsदलित समुदायबाट सिडियो बनेका बिश्वकर्मा अमेरिकामा सम्मानित https://t.co/fVgYy90EbH #Gulminews #Gulmi14 hours agoRetweetसामाजिक परिचालकहरु पनि संगठित https://t.co/CC6ep8uoiT #Gulminews #Gulmi14 hours agoRetweetअर्खलेको युवा क्लव पुनः सक्रिय, नेता विष्टले सहयोग गर्ने https://t.co/sTjpOJHSTA #Gulminews #Gulmi15 hours agoRetweetश्रीमतिका रिसले घरमा आगो लगाएपछि… https://t.co/CXImUBjgTM #Gulminews #Gulmi15 hours agoRetweetओझेलका खबर २८५ औं शृंखला : विवाह गर्ने उमेरमा दुवै आखा गुमाएकी एक युवतीको दर्दनाक घटना https://t.co/zG3LbQyAnp #Gulminews #Gulmi18 hours agoRetweet	गुल्मीको मौसम	Sunny	13 °C	28 Oct 2016